पूराना दिन सम्झँदै राप्तीमा रम्दै महरा जता गयो उतै माला र बाजागाजा – Kite Sansar
संसद सचिवालयकी एक कर्मचारीमाथि जबरजस्ती करणी प्रयास गरेको आरोप लागेपछि राजीनामा दिएका पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा अचेल फुर्सदमा छन्। फुर्सद मतलब घुमफिर गरिरहेका छन्।
फागुन ५ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतले जबरजस्ती करणी प्रयास मुद्दामा सफाइ दिएपछि महराको तीन महिना लामो जेल बसाइ सकिएको थियो।
अदालतबाट सफाइ पाएको एक साता नबित्दै महरा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र दाङ गएका थिए। झन्डै दुई सातादेखि उनी पूरानो राप्ती अञ्चलका क्षेत्र घुमिरहेका छन्।
कहिले सशस्र युद्धका बेला आफ्नी श्रीमती र छोरा बसेको घरमा गएर त कहिले सरकारसँग पहिलो पटक वार्ता भएको ठाउँमा पुगेर उनले पूराना यादहरूलाई फर्काइरहेका छन्।
महरा जाने ठाउँमा पार्टीले कुनै औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरेको छैन। तैपनि महरा जहाँ पुग्छन्, त्यहीँ संक्षिप्त सम्बोधन गर्छन्। षडयन्त्रपूर्वक आफूलाई तीन महिना भूमरीमा पारिएको तर्क गर्छन्।
स्वागत र सम्मानमा बाजागाजासहित जम्मा भएका मानिसलाई आफू निर्दोष रहेको जिकिर गर्छन्। जनताप्रति ऋण भएको भन्दै भविष्यमा ‘जनताकै शक्ति’ले अगाडि बढ्ने प्रण गर्छन।
मंगलबार राति उनी आफ्नो जन्मघर रोल्पा पुगे। सुनिल स्मृति गाउँपालिकाको मैवाङमा रहेको पुर्ख्यौली घरमा उनी २५ वर्षपछि बास बस्न पुगेका हुन्।
पछिल्लो समय यो घर रित्तो थियो। कोही बस्दैन थिए।
महराले जन्मेको घरमा बस्ने भनेपछि कान्छा छोरा राहुल दाङबाट हप्ता दिनअघि रोल्पा पुगेर सरसफाइ र रङरोगन गरेका थिए।
माओवादी ‘जनयुद्ध’ सुरू भएपछि महरा घर बस्न पाएनन्। कहिलेकाहीँ घर र आसपासमा पुगे पनि त्यहाँ सुतेनन्।
पटक-पटक मन्त्री र उपप्रधानमन्त्री हुँदा उनी रोल्पा आउँथे तर जन्मघरमा बस्दैनथे।
पछिल्लो समय महरा दाङको घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १७ स्थित गैरागाउँमा बस्दै आएका छन्। त्यो घर महराका जेठा छोरा एटमको हो। त्यही भएर महरा अघिल्लो प्रतिनिधिसभा सदस्यमा यहीँबाट निर्वाचन लडेका थिए।
महराले यसअघि नै रोल्पाको आफ्नो जग्गा रोल्पास्थित प्राविधिक शिक्षालयलाई दान दिइसकेका छन्।
मंगलबार दाङको मुर्कुटीबाट द्वन्द्वकालमा हिँडेको बाटो पच्छ्याउँदै महरा प्यठान पुगे।
थरूहटको बन्दका कारण पहाडैपहाडको बाटो भएर उनी प्युठानको माण्डपी गाउँपालिका रातापानी, देविस्थान, चकचके, भिङ्ग्री हुँदै रोल्पाको सुलिचौर पुगेका थिए।
रोल्पास्थित जन्मघर पुग्दा उनका समर्थक र शुभचिन्तक मोटरसाइकल र गाडीको ‍र्‍याली निकालेका थिए।
पञ्चेबाजा र बाजागाजाले जन्मस्थलमा स्थानीयले स्वागत गरेको देखेपछि महराले अबदेखि जहिले रोल्पा आएपनि जन्म घरमै बास बस्ने प्रतिवद्धता जनाए।
मन्तव्यका क्रममा उनले यसअघि शिक्षक भएर सबैको ‘गुरु’ भएको स्मरण गर्दै अबदेखि समग्र रोल्पाली जनताको अभिभावक बन्ने प्रण गरे।
‘म रोल्पाली जनताको गुरु हुँ। मेरा चेलाहरू सबै आज उच्च ओहोदामा पुगेका छन्,’ महरालाई उद्धृत गर्दै उनीसँगै रहेका केशरमान बुढाथोकीले भने, ‘रोल्पाको समस्या के हो मलाई राम्रोसँग थाहा छ। रोल्पाको विकासका लागि मैले मास्टर प्लान तयार पारिसकेको छु। अब रोल्पाको विकास गरेर म सबैको अभिभावक बन्न चाहन्छु।’
रोल्पामा बस्दा महरा माओवादीको उद्गमस्थल मानिने ठाउँ थवाङ जाने छन्। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा जाने निर्णय गरेको ऐतिहासिक चुङवान बैठकस्थल पनि पुग्ने छन्।
दाङमा महराले क–कसलाई भेटे?
फागुन १२ गते उनी दाङ आउने थाहा पाएपछि महराका केही शुभचिन्तक स्वागतमा दाङ र कपिलवस्तुको सीमाक्षेत्र धानखोलासम्म पुगेका थिए।
भालुवाङ, लमही, घोराहीलगायत स्थानमा सम्बोधन गर्दै महराले षडयन्त्रपूर्वक आफूलाई भूमरीमा फसाइएको र त्यो लडाइँ जितेर आएको दाबी गरे। राष्ट्रिय स्वाधिनताको सवालमा सधैँ दृढतापूर्वक लाग्ने प्रतिवद्धता पनि सबै ठाउँमा दोहोर्‍याए। लगभग उस्तै भाषण गर्ने महरा बाँकी कुरा समय आएपछि बोल्ने भन्छन्।
फागुन १२ गते उनी घोराहीस्थित आफ्नै निवासमा बसे। त्यसको दोस्रो दिन महरा आफूलाई कम्युनिष्टको सदस्यता प्रदान गर्ने बासुदेव गौतमको घोराही-१८ रझेनाको घरमा गए।
गौतम पूर्वसरकारी कर्मचारी हुन।
रोल्पामा कार्यरत रहँदा तीनै गौतमले २०३८ सालतिर महरालाई तत्कालीन जनमोर्चाको सदस्यता प्रदान गरेको जानकार बताउँछन्।
गौतमका छोरा जीवन गौतम अहिले नेकपा दाङका इञ्चार्ज छन्। बासुदेव गौतमले २०४८ सालको निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा एमालेसँग गरेको व्यक्तिगत तालमेलकै कारण महरा रोल्पाबाट निर्वाचित भएका थिए। जतिबेला तत्कालीन जनमोर्चाले देशभर जम्मा ८ सिट मात्रै जितेको थियो।
आफ्ना राजनीतिक गुरुकहाँ पुगेर पनि महराले आफू निर्दोष रहेको बताए। आफूलाई षडयन्त्रपूर्वक फसाइएको र अदालतले अन्तिममा सफाइ दिएको कुरा सुनाए। गौतमले पनि भनेछन्, ‘तपाईंजत्तिको शालिन व्यक्तिले त्यति तल्लोस्तरको काम गर्नुभयो भन्ने विश्वास छैन। अब फेरि विचलित नभएर देश र जनताको सेवामा खटिनु होला। मेरो सधैँ यहाँलाई शुभेच्छा र शुभकामना छ।’
त्यसपछि महराले कम्युनिष्ट पार्टीका अर्का एक संस्थापक नेता मनिकलाल गौतमलाई घोराही १४ नयाँ बजारस्थित घरमै गएर भेटे।
अन्तरिम विधायक सदस्य तथा प्रेस काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष नारायणप्रसाद शर्मालाई पनि भेटे। महरालाई भेट्न नेकपा दाङका संस्थापक नेता शोभाराम बस्नेत आफैं पुगे।
नेपाली कांग्रेस दाङ क्षेत्र नं. २ का सभापति भूपबहादुर डाँगी पनि महरालाई भेट्न घरमै गएर भेटे। डाँगीले राजनीतिक षडयन्त्रका कारण स्वर्गीय खुमबहादुर खड्कालाई भ्रष्टचारको मुद्दा लगाएर सिध्याएको जस्तै गरी सिध्याउन खोजेको भन्दै सजग रहन महरालाई सचेत तुल्याए। उनले जिल्लाको विकासको लागि अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह पनि गरे।
त्यसपछि महरा दाङको प्रसिद्ध धार्मिक एवं पर्यटकीय स्थल घोराहीको धारापानीस्थित पाण्डवेश्वर महादेव मन्दिरको दर्शन गर्न गए। त्यहाँको विकास लागि मन्दिर व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीलाई सहयोग गर्ने आश्वासन दिए।
महराले तुलसीपुरको बिजौरीमा बस्दै आएका दुबै खुट्टा गुमाएका ‘जनयुद्धका घाइते’ सिपी शर्मालाई घरमै गएर भेटे।
तुलसीपुरको बीपी चोकमा आएर शुभचिन्तकहरुलाई सम्बोधन गरे। त्यसपछि तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १२ स्थित युद्धकालमा आफ्नी पत्नी र कान्छो छोरा राहुल बसेको घरमा पुगे।
त्यसपछि महरा २०६० सालमा पहिलो पटक सरकार र तत्कालीन माओवादीबीच पहिलो वार्ता भएको हापुरेस्थित वार्ता घरमा पुगे।
त्यहाँ उनले आफू र डाक्टर बाबुराम भट्टराई पार्टीकोतर्फबाट वार्तामा खटिँदाको पल स्मरण गरे। पहिलो वार्ता सफल नभए पनि त्यसैलाई उनले नेपालमा शान्तिप्रक्रियाको सुत्रधारका रुपमा अर्थ्याए। त्यहाँ पनि उनको स्वागतमा आएकालाई उनले विकास गर्ने आश्वासन दिए।
पश्चिम दाङवाट फर्केपछि महरा नेपाल-भारत सीमा नाका कोइलाबास पुगे। यो जिल्लाको पूरानो नाका हो। युद्धकालमा माओवादी हिँड्ने बाटो यही थियो।
पूर्वपश्चिम राजमार्ग खुलेपछि कोइलाबास नाका ओझेलमा परेको हो। पछिल्लो समय त्यहाँ जाने कालोपत्रे बाटो निर्माण भइरहेको छ।
नाकामा रहेका नेपाली अहिले पनि भारतको पानी खाएर बाँचेका छन्। मुहान पहिचान गर्न आग्रह गर्दै पिउने पानीको लागि बजेट प्रबन्ध आफूले गर्ने वचन दिएर महरा फर्किए।
रमाइलोमात्रै भइरहेको छ– महरा
बुधबार सेतोपाटीसँगको टेलिफोन कुराकानीमा महराले आफूलाई अहिले रमाइलोमात्रै भइरहेको प्रतिक्रिया दिए।
‘धेरै जनताको खुसी छ ,उनीहरूले सम्मान दिइरहेका छन्, स्वागत गरिरहेका छन्,’ महराले भने।
उनले दिनभर कार्यक्रम हुने गरेको र रातिमा बास बस्ने घरमा जाने गरेको जानकारी दिए।
उनले जन्म घरमा बास बस्दा पूराना कुरा सम्झेको बताए।
‘घरमा बास बस्दा आफूले विगतमा खेतीपाती गरेको, गाउँलेहरूसँग कुराकानी गरेको, स्कूल पढेको, पढाएकोजस्ता सबै कुरा सम्झें,’ उनले भने।
२७ गतेसम्म दाङ फर्किने जानकारी दिँदै रोल्पाबाट आफूलाई निकै उर्जा मिल्ने बताए।
महरा राजनीतिमा कमब्याक कति सहज?
अदालतले सफाइ दिएपछि महराले गरिरहेको यो दौडाहाले एकातिर उनलाई पूराना कुराको महत्वबोध भएकोजस्तो देखिन्छ भने अर्कातिर राजनीतिक कमब्याक हुने अभिलाषा।
धेरै शुभेच्छुक र कार्यकर्ता महराले भनेझैं सालिन महरालाई राजनीतिक षडयन्त्रकै कारण फसाइएको विश्वास गर्छन्।
धेरैलाई लाग्छ- विकास गर्ने नेताको छवि बनाएका नेपाली कांग्रेसका नेता स्वर्गीय खुमबहादुर खड्कालाई जस्तै महरालाई फसाइएको हो। उनी फेरी राजनीतिमा उदाउँछन्।
केही मानिस भने महराको राजनीतिक यात्रामा पूर्णविराम लागिसकेको ठान्छन्।
कुनैबेला कार्यकर्तामा अति नै लोकप्रिय र पार्टीभित्रको समिकरणमा अन्तिम अवस्थासम्म पनि हलचल पैदा गर्न सक्ने ल्याकत राख्ने खुमबहादुर खड्काको जस्तै नियति महराको हुने उनीहरूको अनुमान छ।
‘भ्रष्टचारको मुद्दा जेल सजाय काटेर जिल्ला आउँदा खुमबहादुर खड्काको सम्मानमा पनि यसैगरी स्वागत र सत्कार हुने गरेको थियो। जयजयकार हुने गरेको थियो,’ एकजना अधिकारकर्मीले भने ‘महरामाथि लागेको नैतिकताको दाग पनि मेटिन सजिलो अवश्य हुने छैन। हुनसक्छ त्यो षडयन्त्र नै होला,तर अब महरा राजनीतिमा कमब्याक हुन असम्भव नै छ।’
महराले आफूलाई निर्दोष देखाउन जति नै भेटघाट र दौडधुप गरेपनि एकपटक लागिसकेको दाग नपखालिने उनले तर्क गरे।
‘यतिका वर्ष शक्तिमा हुँदा महरा किन आज भेटेका मानिसहरूलाई भेट्न गएनन्,’ ती अधिकारकर्मीले प्रश्न गरे, ‘यो बीचमा राप्तीमा धेरै पानी बगिसकेको छ। अब जनयुद्धका घाइते, राजनीतिक गुरु, वार्ता घर र जन्म घर टेक्दैमा केही हुनेवाला छैन।’
महराका समर्थक भने उनलाई अदालतले सफाइ दिएको हुँदा खुमबहादुर खड्काकोजस्तै गरी राजनीतिमा कमव्याक गर्न अप्ठेरो नहुने तर्क गर्छन्।
‘महरा सरको लोकप्रियता कति छ, उहाँलाई जनताले कति रूचाउनु हुन्छ भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ,’ उनका एक समर्थकले भने, ‘उहाँ जहाँबाट निर्वाचन लडे पनि जनताले अत्यधिक मतले विजयी बनाउने छन्।’
Pics from Facebook Wall of Kesharman Budhathoki